I-Ocean View Studio - Ifaka ibhulakufesi nsuku zonke - I-Airbnb
I-Ocean View Studio - Ifaka ibhulakufesi nsuku zonke
Indlu encane ibungazwe ngu-Sami-Jo
U-Sami-Jo Ungumbungazi ovelele
Itholakala enhliziyweni yengadi ebabazekayo eCamps Bay, i-Ocean View Studio inokubukwa okumangalisayo kolwandle, ubhavu wangaphandle kanye nesitezi esikhulu. Indawo yangaphakathi iyinhle kodwa ihlanzekile futhi indlu yokugezela ineshawa enkulu. Ngenkathi zisahleli, izivakashi zimenywa ukuthi zisebenzisa ngokugcwele izakhiwo ezimangalisayo ezikule ndawo ezihlanganisa amachibi, inkundla yethenisi, i-spa kanye nerestshurenti. Ukudla kwasekuseni kufakiwe nsuku zonke futhi kuqukethe ukukhetha phakathi kwe-muesli neyogathi noma ubhekeni namaqanda okuphekwe kwasekuseni.
Iyakhanya, iyakhanya futhi inomoya, i-Ocean View Studio inikeza izivakashi ukufinyelela kwemvelo endaweni ewubukhazikhazi. Buka ukushona kwelanga kubhavu wangaphandle ngenkathi uphuza engilazini ene-bubbly, noma ujabulele ekuseni kakhulu ubuka izingadi ezinhle. Ukuhlala e-Ocean View Studio kumayelana nokuthola ukunethezeka okulula kwemvelo.
4.80 · 71 okushiwo abanye
ICamps Bay ayigcini nje ngokufaka elinye lamabhishi angcono kakhulu eKapa, iphinde igcwale yonke indawo ngezindawo zokudlela, amabha, izitolo kanye nezindawo zokungcebeleka. Kusukela ekuzulazuleni ekuseni kakhulu endaweni yokuvakasha, ikhofi lisesandleni, ukuya kuma-cocktails ekushoneni kwelanga ngaphambi kokusabalala kwesidlo sakusihlwa esiwubukhazikhazi, konke kumayelana nempilo emnandi.
Ngihlala eduze kakhulu ne-POD futhi ngizotholakala kokubili ku-APP, ku-WhatsApp, futhi mathupha uma kudingeka.
USami-Jo Ungumbungazi ovelele